Barbaariye bulsho Ustaad C/qaadir Maxamed Shirwac. - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > Barbaariye bulsho Ustaad C/qaadir Maxamed Shirwac.
September 4, 2016 admin22557 Comments on Barbaariye bulsho Ustaad C/qaadir Maxamed Shirwac.
Prof C/qaadir Maxamed Shirwac waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo noloshiisa inteedii badneyd u hibeeyay barbaarinta iyo wax barista ardeyda Soomaaliyeed .
Dadka aan garaneyn C/qaadir Shirwac waa abwaan waxana heesaha uu sameeyay ka mid ah heesta caanka ah ee “Qarad” ee uu ku luuqeeyo fannaanka weyn Xasan Aden Samatar .
Ustaad C/qaadir Shiwac waxaa uu muddo dheer ka tirsanaa bahdii Wasaaraddii Waxbarashada iyo Barbaarinta . Waxa uu Koofurta magaalada Galkacyo ka hirgaliyay sanado ka hor Jaamacadda Gaalkacyo oo ay dhilinyaro Soomaaliyeed bilaabeen in ay ka qalin jabiyaan.
Hadda waxaa uu ka mid yahay C/qaadir Shiwac dadka hormuudka ka ah dhismaha waddo isku xirta Hobyo iyo Wisil oo wax badan laga qabtay socotadana ay mahadiyaan ,sidaa awgeed waa nin u taagan horumarin bulsho oo marna aan ku lug yeelan cudurada halakeeyay wadankeenna ee qabiilki ka mid yahay .
Dhawaan Ayaan Ustaad C/qaadir Maxamed Shirwac kula kulmay Shirkii Bulshada Rayidka ee Cadaado ,waxaan soo xusuusiyay waagii Ceel Jaalle oo 1988-dii aan anigu ka mid ah ardeyda Sh/dhex ka soo gashay oo isaguna uu ahaa Gudoomiyaha Ceel Jeelle halka Ustaad Maxamuud Cali Calasoow “Jaani Dheere” uu ahaa ku xigeenka Gudoomiyaha .
Waxuu I weydiiyay su’aal maalintii aan Ceel Jaalle galay la I weydiiyay “ Hiwaayadaadu maxeey aheyd? Waxa aan ugu jawaabay Fanka . Waxa aan xusuusiyay qaar ka mid ah hadaladii uu inoo jeediyay maalintii aan Ceel Jaalle galnay ee iigu horeysay.
Waxa aan xusuustaa barigaas in ardeyda ay kala dooranayaan Hiwaayadaha kala ah , Difaaca,Isboortiga ,Fanka iyo Farshaxanka ,Waciyi galinta iyo wixii la mid ah.
Waxa ay aheyd markii ugu horeysay ee codkeyga uu raadiyo ka baxo oo waxaan ka mid ahaa ardey ay wareysatay Khadiija Mayow Abuukar oo aheyd wariye ka tirsan Radio Muqdisho.
Ustaad C/qaadir Shirwac waxa uu baro iyo maamulaba ka soo noqday Dugsiga Sar ee Shabeelle oo ahaa iskuul kuleejaale ah in kasta oo aan anigu ku soo gaarin xilligaasi uu ahaa maamulaha .
Ustaad Shirwac iyo dadka la mid ah waa kuwa ay maanta bulshadeenu u baahan tahay in ay ku deydaan . Markii uu hadlayaan xaqiiqdii carrabkoodu waxaa dul saran Qarannimo
Madaxa Ururada Bulshada Rayidka ee Puntland PUNSAA Wariye hore Nuur Shire Cismaan oo hogaaminayay Ururada Bulshada Rayidka Puntland ayaa yiri waxa aan weynay diyaarad inoo soo qaada Cadaado kolkaas Ayaan Shirwac oo Galkacyo joogo la hadlay wuxuu ugu yiri ,buu yir Shirwac,dhulka soo mara oo aan Cadaado dhulka kuwada tagno. Shirwacba haduu yiri dhulka soo mara waan la dhacnay sidii baan yeelnay innaga oo wada soconna ayaanan Cadaado wada imanay ayuu yiri Nuur Shire Cismaan ,taas waxa ay muujineysa kalsoonida lagu qabo hadalka Ustaad Shirwac oo aan ah qof wanaag lagu yaqaan lana aamini karo.
W/Qorey: Maxamed Ibraahim Macalimuu
Tagged Gob Macalimuu Shirwac
Barcelona Oo Hoos U Dhigtay Dhibaatada Dhaawac Ee Andre Gomes